सरकारी कार्यालयका कल डिटेल सार्वजनिक गरौं « नेपालबहस
सरकारी कार्यालयका कल डिटेल सार्वजनिक गरौं
प्रकाशित मिति : ७ असार २०७८, सोमबार १३:५४
नेपालमा सरकारको काम भनेको आफ्ना आसेपासे, अरौटे, भरौटे, हुक्के, चिलिमे, बैठके र अ‍ैठनेहरुलाई चुनावमा गरेको लगानी उठाउन र आफ्ना पाखुरेहरुलाई आनासुकी आम्दानी हुने वातावरण मिलाउन ठेक्कापट्टा मिलाई दिने र कमिशन आउने काममा सेटिङ्ग मिलाई दिने भन्दा माथि केही पनि रहेको पाईदैन् ।
सरकारले शिक्षामा भएको अनियमितता, स्वास्थ्यमा भएको खेलवाड, नागरिक सुरक्षाका बिषयमा के भैरहेको छ ? खाद्यान्न संकट र पिउने पानीको अभाव के छ ? भनेर भनेर कहि कतै सेमिनार र गोष्ठी भएको पाईँदैन । सरकार विकास भनेको भ्यू टावर र आकाशे पुललाई मात्र देख्छ । बाटो र भवन बनाउने, टेण्डर पार्ने र ठेकेदारबाट चुनाव खर्च झार्ने अभियानले सिंगो लोकतन्त्र बदनाम भैरहेको छ । नागरिकको विकासको आशामा सधै तुषारापात परिरहेको छ । देशको वर्तमान राजनीति देखेर आम नेपालीको आँखाबाट बलिन्द्रधारा आँसु बगिरहेको छ ।
अहिले मुलुकमा कोरोना नामको आयातित महामारीले छोपेको छ । बाँच्ने आशामा कटौति गर्दै नागरिकले घरभित्रै थुनिएर बस्नु परिरहेको छ । सरकार खोप ल्याउने हावादारी भाषणमा ब्यस्त छ । नागरिकलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या परिरहेको छ । के सरकारसँग तथ्यांक छ ? कति नेपालीले खान समेत नपाएर अकालमै मर्नु परिरहेको छ ।
सरकारी कार्यालयहरुको टेलिफोनको बिल हेर्दा सातो जान्छ । यत्तिका फोनहरु कहाँ र कस्का लागि गरिएका हुन्छन् ? भनेर आम नागरिकहरुको मन कटक्क खान्छ । के सरकारी कार्यालयका फोनहरु गरिब तथा असहाय नागरिकहरुका जीवनगुजाराका बिषयमा कुराकानी गर्नमा उपयोग हुन्छन् ? कोरोनाको कहरमा बिरामीले के कस्तो उपचार पाईरहेका छन् ? भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको फोन कतिपटक प्रयोगमा आउँछ ? बिद्यार्थीले पढन पाए कि पाएनन् ? भनेर शिक्षा मन्त्रालयको फोन बिद्यालयसम्म आईपुग्छ कि पुग्दैन ? बालुवाटारको छानो उडाउँदा चिन्ता ब्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओली जनताका घरमा छाना उडाउँदा किन दुःखी हुदैनन् ?
नागरिकहरुले सरकारले कसरी नागरिकको पसिनामा रजाई गरीरहेको छ भन्ने कुरा जान्दा पनि जान्दैनन् । जनताको करलाई जनताकै बिकासका लागि, जनताकै पक्षमा खर्च गर्नुपर्छ, भान्सेले पहिल्यै भँडार रित्याउनु हुदैन भन्ने कुरा वर्तमानका राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरु ठान्दा पनि ठान्दैनन् ।
अहिले जताततै दलाल र हलाहलहरुको मात्रै बिगबिगी छ । जनताको रगतमा होली खेलेर आएका शाषकहरुले आफ्नाे हात राम्ररी पखालेका सम्म छैनन् । बिरालोले कण्ठी झुण्ड्याएको बिश्वासमा अघि लागेका मुसाहरुको कन्तबिजोग अहिले ज्यादै टिठलाग्दो अवस्थामा आईपुगेको देखिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री होस् या पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु हुन, दलाल र भ्रष्टाचारीको भान्सामा सँगै ज्यूँनार गर्दै गरेका भेटिन्छन् ।
जनता महंगी र अभावले बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । देशका प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको सरकारको पुर्नगठन गर्न र श्रीमान् श्रीमतिलाई आलोपालो मन्त्री बनाउने कार्य गरेर लज्जाबोधलाई हत्केलाले छोपेर बीच सडकमा रमाईरहेका छन् । जनता भोक र रोगसँग जुधिरहेका बेला देशको सरकार प्रमूख विदेशीलाई नागरिकता बिक्री गर्न हतारिएको देखिन्छ । सडक किनारामा निस्कनै मुस्किल छ आजकल । जताततै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनको आगोको ज्वाला भेटिन्छ ।
जनतामा अहिले वर्तमान सरकारप्रति आशा भन्दा आक्रोश बढी रहेको छ । जनताका मनमा सरकार छ भन्ने आशा समेत मरिसकेको छ । सरकार निकम्मा हुँदा प्रमूख प्रतिपक्षले जनताका आवाज सशक्त रुपमा उठाउनु पर्ने हो तर सशक्त प्रतिपक्ष नभएको मुलुकमा सत्तापक्षले रत्यौली नखेले कस्ले खेल्ने ? सरकारले यतिसम्म नौटङ्गी नदेखाए कस्ले देखाउने ?
बिगतमा सिंगो कांग्रेस ओलीका गलत कदमका बिरुद्धमा सडकमा निस्किएका बेलामा पनि कांग्रेस सभापति देउवा भने बालुवाटारमै ओलीसँग सँगै बसेर जनताका भावनामा ठेस लाग्ने, चलिरहेको ब्यवस्थामाथि ब्रेक लाग्ने, अनैतिक गर्भधारणमा रमाईरहेका देखिन्थे । जे होस् कांग्रेस सभापति देउवाले अहिले आएर आफ्नाे राजनीतिक धरातल बुझेकोमा खुशी लागेको छ ।
कतिपटक प्रधानमन्त्रीले गरिब जनताका मोबाईलमा फोन गरेर उनीहरुका समस्याहरु बुभ्ने र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काममा देशको सरकारी टेलिफोन उपयोग भयो । कति भोकमरीमा परेका कर्णालीका जनताको हालखबर सोधे ? कति पटक पहिरोमा परेका, अभावले डढेका, हुम्ला, मुगु र कालिकोटमा कालै नपुगी मरेका, अन्यायमा परेका नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न देशको सरकारी सञ्चार खर्च भयो ?
आफ्नाे नेतृत्वमा आफै पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराउँदा पनि ३०–३५ सिटभन्दा बढी जित्न नसक्ने, जनताको एजेण्डा संबाेधन गर्न नसक्ने, अपराधीहरुको साथ छोडन नसक्ने, ओलीको आश्वासन र सहयोग बिना चल्न नसक्नेले सरकारको नेतृत्व गर्लान भन्ने कुन भरपर्दो आधार समेत देखिन सकेको छैन । बिपक्षी दलहरुले गल लगाएर यहाँसम्म ल्याएका कांग्रेस सभापतिलाई कति दिनसम्म टेको लगाएर अड्याउने हुन ? कुनै भरोषा गर्न सकिने दर्बिला आधारहरु पनि देखिदैनन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा भागबण्डामै रमाएर प्रतिपक्षमै बसेको बेस । ओलीयुगको महान अभियानमा सती गएकै बेस ।
नेपालको राजनीतिलाई असाध्यै धेरै दुर्गन्धित बनाएका वर्तमानका राजनीतिक दलहरुले जनताले लडेर र मरेर ल्याईदिएको ब्यवस्थालाई समेत बदनाम गराएर छोडे । जनताका पक्षमा भन्दा डन, गुण्डा र ठेकेदारका पक्षमा काम गर्दा बढी कमिशन आउने भएकोले त्यतैतिर गहिरो नाता जोडे । लाज, शरम, घीन केही लाग्दैन वर्तमानकाे नेतृत्व वर्गमा रहेका आफुलाई राजनीतिज्ञ हौ भन्ने भातमाराहरुलाई। आफ्ना देशका नागरिक बेच्नेदेखि पासपोर्टमा राजस्व उठाएर घिच्ने अनि आफ्ना देशका होनहार युवा जनशक्तिलाई देश छोडन बाध्य बनाएर आफु तिनै नागरिकले तिरेको करबाट छाली खोसम्मका हर्कतहरु गर्न किञ्चित पनि अप्ठ्यारो मान्दैनन् । नागरिकहरुले सरकारले कसरी नागरिकको पसिनामा रजाई गरीरहेको छ भन्ने कुरा जान्दा पनि जान्दैनन् । जनताको करलाई जनताकै बिकासका लागि, जनताकै पक्षमा खर्च गर्नुपर्छ, भान्सेले पहिल्यै भँडार रित्याउनु हुदैन भन्ने कुरा वर्तमानका राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरु ठान्दा पनि ठान्दैनन् ।
आधा भन्दा बढी नागरिकहरु अहिले पनि अस्पताल नहेरी मर्छन्। अनि लाज लाग्दैन यो देशका शासकहरुलाई टाउको दुख्ने बित्तिकै र पातलो दिसा लाग्ने बित्तिकै सिंगापुर र अमेरिका जान ? नागरिकको चासो यो बिषयमा अब बढन जरुरी छ कि जनताको करबाट चल्ने शितलनिवास, बालुवाटार र सिंहदरबार, मन्त्रालयहरु र विभागहरुबाट हुने प्रत्येक खर्च शिर्षकहरु आम नागरिकहरुले जानकारी पाउन सक्ने हुनुपर्छ । शितलनिवास, बालुवाटार र सिंहदरबारबाट कहिले, किन, कुन बिषयमा, को कससँग टेलिफोनको उपयोग हुन्छ भन्ने बिषयमा जानकारी राख्न जरुरी छ । अब हर कल रेकर्ड मासिक रुपमा सर्वसाधारण नागरिकहरुले जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्ने सिस्टम बसाउन जरुरी छ ।
बालुवाटार र सिंहदरबारका, मन्त्री र सचिवसम्मका हरेक फोनका कल डिटेल हेरौं । कतिपटक प्रधानमन्त्रीले गरिब जनताका मोबाईलमा फोन गरेर उनीहरुका समस्याहरु बुभ्ने र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काममा देशको सरकारी टेलिफोन उपयोग भयो । कति भोकमरीमा परेका कर्णालीका जनताको हालखबर सोधे ? कति पटक पहिरोमा परेका, अभावले डढेका, हुम्ला, मुगु र कालिकोटमा कालै नपुगी मरेका, अन्यायमा परेका नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न देशको सरकारी सञ्चार खर्च भयो ?
अनि कति पटक सुन तस्कर र भ्रष्टाचारीहरुको लावालस्कर बोलाएर बालुवाटारमा भोजभतेर गरे भनेर ? के बालुवाटारलाई थाहा छ ? ओली प्रधानमन्त्री भए पछि कति नागरिकहरु दुई छाक खानासम्म नपाएर भोकै मरे ? कति जनता प्राकृतिक बिपत्ति र प्रकोपमा परेर बिचल्लीमा परे ? कतिको बसोबास उठाईयो ? कतिलाई बिदेशीको हली हुन पठाईयो ? सरकारका ६ याग होल्डर ठेकेदारहरु कहिले कहिले र के के बिषयमा विदेशी प्रभूसँग लम्पसार पर्दै सत्ता जोगाई दिन हारगुहार गर्छन् ? सबै कल डिटेलबाट प्राप्त हुने भएकोले यी बिषयहरु अब सार्वजनिक चासोको बिषय हुनुपर्छ । त्यो पनि अब प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुले थाहा पाउनु पर्छ ।
रेकर्ड हेरौं, बालुवाटार र सिंहदरबारमा आफ्ना पेशागत समस्याहरु लिएर कति किसानहरु छिर्छन् ? कति मजदुर र गरिवीले पिल्सिएका नेपाली अनुहारहरुले बालुवाटार र सिंहदरबारको मुख देख्छन् ? सिंहदरबारको गेटमा सर्वसाधारण नेपालीलाई आफ्ना समस्या सुनाउने या टिपाउने कस्तो संयन्त्र छ ?
के भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, कालोबजारी र दुईनम्बरी, कमिशनखोर कर्मचारी, देश लुटने बहुरुपी ब्रम्हचारीहरुले झै गाउँको मजदुर, किसान र गरीव नेपालीले बालुवाटार र सिंहदरबारको गेटबाट छिर्ने अनुमति पाउँछ ? यिनीहरुले सिधैं जनताका प्रतिनिधिका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटन पाउने, आफ्ना समस्या सुनाउने समय कहिले आउँछ ? अब नागरिक आन्दोलन चलाउने र जनताका अधिकारका पक्षमा आन्दोलन चलाउनेहरुले यस्ता बिषयहरु बुभ्न जरुरी छ ।